2020 Guide dhamaystiran Baaritaanka Kartida garasho [PAT]
updated:Oct. 20, 2020
Tilmaamaha Guud ee PAT
The Imtixaanka Awoodda garasho, sidoo kale loo yaqaan PAT, waa mid ka mid ah afar baaritaano ah Baaritaanka Admission Ilkaha. Waxaa muhiim ah in si fiican loo sameeyo imtixaanka this sida ay ugu dhaliyay oo kala duwan oo ka mid ah saddex baaritaano kale – Survey of Sciences Dabiiciga ah, fahamka reading, oo Sabab u tiro ahaaneed – in ay habeeyaan score Celceliska Academic aad. Sidaa darteed, aad rabto in aad rock PAT tan iyo markii ay gool oo keliya u taagan tahay dadka kale ee.
Sidoo kale waxaan rumaysanahay PAT waa mid ka mid ah qaybaha ugu fudud ee DAT si wanaagsan on of. Celceliska Waxbarashada iyo dhibcaha PAT yihiin labada dhibcaha la eegi doono marka hore. A score PAT sare kordhiyo xoog xooggiinii iyo kayd si codsigaaga kuwaas oo kaa caawin doonaa meel kasta oo laga yaabo in wax ka yar ku haboon.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah tilmaamaha guud ee ay tahay in aad raacdo si ay u caawiyaan aad u hesho dhibco sare guud:
Tirtiridda: Eeg jawaabaha suuragal ah in su'aal kasta oo la helo kuwa aad baabiin karta. Baabi'inta jawaabo kaa caawin doona inaad takhaluso distractors iyo si dhakhso ah soo jawaab sax ah. Tani waa wax waxtar leh in la sameeyo iyadoo su'aal kasta oo ku saabsan DAT ah; waxaa jira distractors on su'aal kasta.
Maaraynta Waqtiga: Hubi in aad dhamaystirka hoosaadyo ee hab wakhti. Waxaad leedahay 40 seconds max per su'aal si aad u ma awoodi karaan inay waqtiga ka dhumin imtixaanka this. Habka ugu fiican si ay u noqdaan hufan ee maamulka waqtiga aad on PAT waa in ay raacaan tilmaamaha soo socda.
Practice: Ma dhibaatooyin dhaqanka!
Practice: Ma dhibaatooyin dhaqanka more!
Practice: Ma dhibaatooyin dhaqanka xitaa ka sii badan! Ma baaritaano badan oo dhab ah iyadoo ay aad karto ee PAT; ayaa in ka badan si fiican u! Tani waa jidka keliya ee burburin PAT.
PAT waxay leedahay 90 su'aalo guud iyo wuxuu ka kooban yahay 6 -hoosaadyo la 15 su'aalo ah oo ku saabsan mid kasta. Halkan waxaa ku qoran sharaxaad of subtest kasta:
Apertures (Keyholes): wax A 3D waxa muujiyay oo ay la socdaan dulmar ah 5 apertures of furan oo waa in aad loo garto aperture wax 3D gudbi karin. Waxaa jira kaliya hal aperture saxda ah ee shay kasta 3D. Ka hor marayay aperture ah, shayga jiho kasta u beddelmi karo iyo / ama bilaabay iyada oo aperture dhinaca ah ma muujiyay. Marka ayaa ku soo bilowday dhex aperture ah, waxaa laga yaabaa in aan la qaloocdo ama jeestay. Waa in si buuxda u dhex maro furitaanka taas oo ah qaabka saxda ah ee dulmar ku haboon dibadda ee shayga. sheeyada iyo apertures Labadaba waxaa keentay in ay qaaddo, Sidaa darteed, waxaa suurto gal furitaanka ah in ay qaab saxda ah, laakiin aad u yar for shayga. Khilaaf ku size waa weyn oo ku filan si loo ogaado by isha. Ma jiraan wax isdaba marin in qayb kasta oo qarsoon oo shayga. Si kastaba ha ahaatee, haddii tiradaasi ayaa degidda symmetric, qaybta qarsoona waa symmetric la qaybta muujiyay.
view Aqoonsiga (Top / Front / End): Waxaad waxaa lagu soo bandhigay sawiro top ka, hore, oo dhammaadkeeduna wuxuu views shayada adag kala duwan. views ay ka maqan yihiin aragtida; taasoo la micno ah in dhibcaha ee dusha sare viewed loo arko qaab isku midka ah ee aragtida. Dhibaatooyinka ayaa ku tusi doona laba views shayga afar beddeli shayga si ay u buuxiyaan view ka maqan. Khadadka Hidden waxaa lagu muujiyey sida khadadka lagu tuuri.
xagasha Takoorka (ciidmada xagal): Afar xaglood waxaa lagu soo bandhigay oo waa inaad iyaga falan ka yar si ay ugu weyn.
laabi Paper (Hole feedh): square A guri warqad waxaa duubnaadaan hal jeer ama ka badan, ka dibna ka dalooliyey oo waxaa feeray waxa ku jira. The khadadka adag ayaa tilmaamaya booska uu ka warqada duubnaadaan. Wargeyska ayaa duubnaadaan had iyo jeer weli cidhifyada square asalka ah gudahood. Wargeyska ayaa marna soo jeestay ama qaloocdo. Waxaad si ay u kala fur maskax ahaan warqad iyo ogaado booska godadkii in square asalka.
Tirinta Cube: tiradaasi A by wada keenidda xabbadood oo size isla la soo bandhigay for kasta dhibaatooyinka. Ka dib markii xabadaha ayaa lagu wada adkaynayo ay rinji on dhinacyada oo dhan marka laga reebo xagga hoose on taas oo ay ku nasanayso. The xabadaha kaliya qarsoon yihiin kuwa loo baahan yahay si ay u taageeraan xabadaha kale. Waxaad leedahay in la baaro tiradaasi kasta si dhow si loo ogaado inta xabadaha leeyihiin sida badan oo dhinac ay rinji.
3D Development Form (laabi Qaabka): hannaankii A guri lagu soo bandhigi doonaa oo la duubnaadaan doonaa tirada 3D ah. Tirada saxda ah waa mid ka mid ah afar la siiyo xaq u of hannaankii. Waxaa jira kaliya hal tirada saxda ah ee kasta. The ka baxsan hannaanka waa waxa la arko ee bidixda.
Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah hababka qaadashada baaritaanka kala duwan oo dad badan ayaa ka helay waxtar u PAT. Waxaan kula talin lahaa iyaga oo isku dayaya baxay oo arkaya oo dhan kuwa ugu wanaagsan ee aad isticmaali. Waxaan kaliya loo isticmaalo dhowr ka mid ah oo lagu ogaaday in dadka kale ma ay waxtar ii. waxa keliya ee aad u baahan tahay in la geliyaa dhaqanka oo bal arag waxa aad ugu badan waxay ka caawisaa. Jawaabaha dhibaatooyinka ay ku qoran yihiin hoose ee qaybtan.
Top / Front / End Habka: subtest Tani waa in my opinion ugu adag. Waxaa jira hab kuma jiro in aan soo arkay in la sameeyo this sahlan. Sida ugu wanaagsan ee ay u soo dhowaadaan waa isku mid sida ku view Aqoonsiga (Top / Front / End) subtest. Arki shay kasta top ka, hore iyo dhamaadka views. Xusuusnow jawaabaha noqon kartaa in mid ka mid ah views ama kuwa xataa views dadab. Waxaad u baahan tahay in ay ku dhaqmaan wax badan oo dhibaato ah, kuwaas oo si aad u hesho fiican Sawirashada waxyaabaha ka oo dhan views kala duwan. Waxaan helay this video in ay waxtar ugu sharaxay sidii ay u arki shay ee subtest this.
view Aqoonsiga (Top / Front / End)
Line Habka Tirinta: Tani waa hab in badan ayaa la isticmaalay muddo, laakiin DAT hadda waxay leedahay dhibaatooyin on subtest this aan looga jawaabi karin habkan. Sidaa darteed, ma tiirsan oo keliya habkan, sababtoo ah ma kaa caawin doona inta badan dhibaatooyinka. Fiiri view kasta (top, hore, ama dhamaadka) in la siiyaa in su'aasha xisaabo inta khadadka jiraan for view in. Markaas arki jawaab doorasho kasta oo ka mid ah kuwa views kala xisaabo inta khadadka waxaa jira. Baabi'iyo doorashooyin jawaabta aan lahayn tallaabadaas tirada khadadka for view kasta oo aad timaado doonaa jawaabtaada.
Top / Front / End Habka: Arki jawaab doorasho kasta sidii wax a 3D ku salaysan off of hogaanka, hore, ama la joojiyo views in la siiyaa in dhibaatada. Is barbar dhig shay 3D ah in aad visualized in doorashooyin jawaabta iyo baabi'iyo distractors oo dooro jawaabta saxda ah.
xagasha Takoorka (ciidmada xagal)
Habka laptop: Bal qiyaas xagal kasta waa laptop ka dhanka viewed. Bal qiyaas hal line of xagal waa salka laptop oo aan dhaqaaqi doono iyo line kale oo xagal waa shaashadda oo ku dhaqaajiyaan. Markaas qiyaasi oo laptop noqon lahaa ugu fudud in la xiro. laptop ah in ay xirtey fudud ku noqon lahaa xagal yar. Waxaan helay habkan waxtar ii buuxinta subtest this.
laser Habka: Habkaan waxa loo isticmaali karaa in la kala saaro xagal yar oo u dhexeeya laba xaglood. The laba xaglood oo waa in ay leeyihiin line la mid toosan / horizontal in aad is barbardhigi kartaa in. Bal qiyaas line toosan / siman sida salka laser oo dejineysa guri dhulka ku. line kale waa saldhigga qoriga in gani doonaa laser ah. laser la dhaadhaca steepest noqon doonaa xagal yar. Jaantuska 1 ayaa xagal yar tusaalahan.
Circle Habka: Habkaan waxa loo isticmaali karaa in la kala saaro xagal yar oo u dhexeeya laba xaglood. Waxaan jeclahay habkan ay la socdaan Habka laptop waayo, subtest this. Aruuri meelaha gudaha oo ka mid ah laba xaglood oo mid ah iyo maskax sawiri goobo meelaha ugu hooseeya ee xaglaha. Bal eeg iyo dib u dhexeeya laba xaglood oo si deg deg ah iyo in aad awooddo in la kala saaro labada taas oo ka mid ah waxay leedahay xagal yar. Jaantuska 1 ayaa xagal yar tusaalahan.
From Distance A: Waxaan maqlay dad badan oo ku odhan dib u fadhiisan kursigaaga iyo u arkaan xaglaha meel fog ka waayo subtest this. Waxaa laga yaabaa in caawisaa ee laser Habka ama dadka qaarkood, laakiin waxaan helay horjeeda. Waxaan helay iyadoo ay adag tahay in la kala saaro xaglo marka aad fadhiya fog iyo dib ha u kicina dhow eegay oo ku. Waxaan ahaa kor u dhow oo shaqsi ah la computer ah inta lagu guda jiro subtest iyo ogaaday in in ay ugu waxtar ii la Circle Habka iyo xataa Habka laptop. Anigu waxaan iyada u doorbiday in hab, laakiin si kasta oo iyaga u gaar ah.
laabi Paper (Hole feedh)
Balse aay tahay-Tac Cirib Habka: Anigu ma aan isticmaalaan hab for qaybtan. Waxaan kaliya visualized godka iyo maskax biloowday warqada si loo ogaado meesha ay godad kale oo ay noqon doontaa. Waxaa laga yaabaa in kaliya ½ of feer godka halkii feer ku meel daloosha oo dhameystiran warqad taas oo ka dhigaysa in ay wax yar ka badan oo adag in la ogaado. Waxaan helay subtest ay tani u noqon fudud ee. Habka baray, si kastaba ha ahaatee, waa in aad ka dhaansado 4 a×4 square oo calaamadee X meel daloosha oo la feeray xilli warqada la xiriirta 4×4 square. Markaas calaamadee X ah square kasta oo waxay yeelan doonaan god sida aad kala fur warqada.
Cube Habka Tirinta: Tani waa subtest labaad fudud in wanaag la sameeyo. Waayo, tiradaasi walba soo bandhigay in subtest dhigi miis sida soo socda:
Lambarada waxa ay u taaganyihiin tirada dhinac rinji on xabadaha ee tiradaasi. Halkan waxaa ku qoran tusaale ka mid ah tirinta ilaa tirada dhinac rinji on saaraayo kasta in tiradaasi:
Halkan waxaa ku qoran miiskaaga updated hadda la count goolashiisa ee tirada dhinac rinji for saaraayo kasta shaxanka:
Haddaba kaliya aad qabto in aad ka jawaabto su'aalaha sida ay miiskaaga. Mushaharka in kasta oo xabadaha qarsoon dareenka, hubi in aad tirisaan xaq iyo aad ACE doonaa subtest this.
3D Development Form (laabi Qaabka)
Habka Tirinta Side: Dhibaatooyinka qaar ka mid ah waxaa laga yaabaa inaad awoodo inuu isticmaalo habkan, laakiin ma shaqayn doonaa dhibaatooyinka oo dhan. Raadi qaabka ugu weyn hannaankii gudaha iyo tirin tirada dhinac ee qaabka. waxaa barbar dhigtaa doorashooyin jawaabta si loo ogaado doorashada saxda ah, ama ugu yaraan in la baabi'iyo qaar ka mid ah doorashooyinka.
Habka aaddinta qaabka: Raadi qaabka ugu weyn hannaankii gudaha iyo isbarbar dhig qaabka la qaababka in doorashooyin jawaabta si loo ogaado jawaabta saxda ah, ama ugu yaraan in la baabi'iyo qaar ka mid ah doorashooyinka.
Habka aaddinta Color: Habkani waa la mid ah Habka aaddinta qaabka marka laga reebo in aad is barbar dhig qayb ka mid ah hadhka leh ee hannaanka guri in ay ka qeyb u dhiganta on hannaankii duubnaadaan in doorashooyin jawaabta. Hubi in qayb ka mid ah hadhka leh waa in meesha saxda ah ee hannaanka duubnaadaan. Continue si loo hubiyo in dhammaan qaybaha hadhka dhigmaan doorashada jawaabta si loo ogaado mid ka mid sax ah.
Waxaad leedahay 60 daqiiqo si ay u dhamaystiraan PAT. Waxaa jira 6 -hoosaadyo on PAT, laakin waxay dhammaan u kala duwan yihiin dhib. Qaar ka mid ah hawl yar ka badan kuwa kale oo kala duwan doonaa inta waqti ay qaadato si ay u dhamaystiraan.
Waa inaad isku daydaa inaad buuxiso subtest kasta in ka yar 10 daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, ah xagasha Takoorka (ciidmada xagal), laabi Paper (Hole feedh), iyo Tirinta Cube -hoosaadyo yihiin inta badan ka sahlan ka badan dadka kale iyo waa in la buuxiyaa si fiican hoos 10 daqiiqo. Tani waxay aad u oggolaan doonaa waqti dheeraad ah haddii loo baahdo for-hoosaadyo kale oo jira waqti dheeraad ah baabbi'iya.
Waxaa jira xad ah qalabka yar dib u eegis kala duwan ee PAT iyo waxay yihiin dhammaan khayraadka si caddaalad ah la mid ah oo wanaagsan. runtii Waxaad ma aan tegi karo khalad kasta oo iyaga ka mid ah soo baxay suuqa maanta. Qaar ka mid ah khayraadka badan oo la heli karo waxaa ka mid ah: Kaplan, Review Princeton The, ama Crack DAT PAT
Guud ahaan, Waxaan dhihi lahaa koorsada sameeya shaqada ugu fiican ee aad isku diyaarinaya PAT yahay Crack DAT PAT. Waxay ugu la mid ah PAT dhabta ah waa meesha ugu fog oo dhib ah iyo ku siin dhan qalabka lagama maarmaanka ah si aad u hesho dhibcaha tartan. Waxa kale oo uu leeyahay faaiidooyin waaweyn qaar ka mid ah sida: isticmaalka xad lahayn, dagdag download, iyo ma taariikhda uu dhacayo.
Kaplan iyo Review Princeton The waa labada koorsooyinka dib u eegis dhamaystiran weyn in shaqo weyn sidoo kale aad isku diyaarinaya PAT iyo sidoo kale ku siin lahaa wax dib u eegis dheeraad ah qaybaha haray ee DAT ah. Waxay noqon karaan khayraadka weyn iyo sidoo kale in la tixgeliyo. Waxa kale oo aad arki kartaa marka la barbardhigo buuxda oo ka mid ah koorsooyinka DAT fiican halkan.
PAT waxay noqon kartaa saaxiibkaa ama aad cadowga ugu xun. Qaar ka mid ah u arkaan in ay u babac dhigaya in maskax iyo sidoo kale arki tirooyinka dadka kale ay timaado si fudud. Si kastaba ha ahaatee, aad qabto in ay ku riday markii ay ku dhaqmaan noocaan ah dhibaatooyinka. Baaritaankaan waa mid gaar ah iyo habka kaliya ee lagu luuqeeyo waxa on waa in ay ku dhaqmaan, dhaqanka, iyo dhaqanka!
Haddii aad qabto wax su'aalo ah, comments, ama talo ah in aad u malaynayso in laga yaabo in ay waxtar leh si ay dadka kale ka dibna si xor ah u hoos wadaagaan!
- Sida On Arkay -
37 isticmaalaa maanta
Wuxuu dhacayaa: 10/22
Save $225 Off Course Kaplan DAT Prep
36 isticmaalaa maanta
Wuxuu dhacayaa: 10/23
$150 Off Course Kaplan DAT Prep
Wuxuu dhacayaa: 10/20
Imtixaanka Admission Ilkaha
Sida loo diyaariyo DAT The
Waraysi School Ilkaha
Marka Si Qaado DAT ah?